ဖောကျထှငျးမွငျနိုငျတဲ့ Display နဲ့ ဖုနျးတဈလုံးကို မူပိုငျခှငျ့တငျလိုကျတဲ့ Samsung — Anycall Mobile
By liam September 7, 20202Mins Read
အခုနောကျပိုငျးမှာ စမတျဖုနျးထုတျလုပျတဲ့ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ ဆနျးသဈလှတဲ့ Design နဲ့ဖုနျးတှကေို ထုတျဖို့ ထိုးဖောကျလာကွတာကိုအားလုံးသိပွီဖွဈမှာပါ။ ဥပမာအနနေဲ့ပွရရငျဆို Foldable ဖုနျးတှကေိုပဲပွရမှာပါ။အရငျကဆို Foldable ဖုနျးတှဟော သိပ်ပံကားတှထေဲတှရေ့တဲ့ ဖုနျးတှလေို့ပွောလို့ရပါတယျ။ အခုမှာတော့ကြှနျတျောတို့မကျြစိရှမှေ့ာတငျ ဒီ Foldable ဖုနျးတှကေိုတှရေ့ခဲ့ပါပွီ။
အခုလညျး Samsung ကနေ ဖောကျထှငျးမွငျနိုငျတဲ့ ဖုနျးတဈလုံးကို မူပိုငျခှငျ့တငျလိုကျပါပွီ…Samsung ကနေ ဒီမူပိုငျခှငျ့ကိုတော့ USPTO (United States Patent and Trademark Office) နဲ့ (World Intellectual Property Office) မှာတငျခဲ့တယျလို့ LetsGoDigital ကနဖေျောပွထားပါတယျ။
ဖျောပွထားတဲ့သတငျးထဲမှာ ဖောကျထှငျးမွငျနိုငျတဲ့ ဖုနျးထုတျဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ နညျးပညာအကွောငျးကိုလညျးဖျောပွထားပါတယျ။ နောကျထပျ ဒီနညျးပညာဟာ TVs ၊ monitors ၊ laptops နဲ့ gaming consoles တှမှောပါအသုံးပွုလို့ရဦးမယျလို့သိရပါတယျ။
မူပိုငျခှငျ့တငျထားတဲ့ ဖုနျးဟာ Bezels နညျးနညျးသာရှိတဲ့ ဖောကျထှငျးမွငျနိုငျတဲ့ Screen ကိုသုံးပေးထားတာကိုတှရေ့မှာပါ။ ဒီ Screen ပျေါက Display ကတော့ OLED Display ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ OLED Display တှကေပဲ ဖောကျထှငျးမွငျနိုငျတဲ့ Panel ရစဖေို့ အလငျးထိုးဖောကျနိုငျစှမျးရှိလို့ပါ။
လောလောဆယျတော့ ဒီဖုနျးနဲ့ပတျသကျပွီး ဘယျအခကျြကိုမှာသခြောမသိရသေးပါဘူး။ နောကျထပျ Samsung ဟာ ဒီဖုနျးကို တကယျထုတျနလေား ? မထုတျနလေားဆိုတာကလညျး မသခြောသေးပါဘူး။ ဒီအတိုငျးမူပိုငျခှငျ့သကျသကျတငျတာလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုမူပိုငျခှငျ့ကွောငျ့ နောကျပိုငျးနှဈတှမှော ဖောကျထှငျးမွငျနိုငျတဲ့ Display နဲ့ ဖုနျးတှကေိုတှလေ့ာရတော့မှာလား?
ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့ Display နဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးကို မူပိုင်ခွင့်တင်လိုက်တဲ့ Samsung
အခုနောက်ပိုင်းမှာ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ဆန်းသစ်လှတဲ့ Design နဲ့ဖုန်းတွေကို ထုတ်ဖို့ ထိုးဖောက်လာကြတာကိုအားလုံးသိပြီဖြစ်မှာပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ပြရရင်ဆို Foldable ဖုန်းတွေကိုပဲပြရမှာပါ။
အရင်ကဆို Foldable ဖုန်းတွေဟာ သိပ္ပံကားတွေထဲတွေ့ရတဲ့ ဖုန်းတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိရှေ့မှာတင် ဒီ Foldable ဖုန်းတွေကိုတွေ့ရခဲ့ပါပြီ။
အခုလည်း Samsung ကနေ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးကို မူပိုင်ခွင့်တင်လိုက်ပါပြီ…
Samsung ကနေ ဒီမူပိုင်ခွင့်ကိုတော့ USPTO (United States Patent and Trademark Office) ၊ WIPO (World Intellectual Property Office) မှာတင်ခဲ့တယ်လို့ LetsGoDigital ကနေဖော်ပြထားပါတယ်။ဖော်ပြထားတဲ့သတင်းထဲမှာ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့ ဖုန်းထုတ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာအကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ဒီနည်းပညာဟာ TVs ၊ monitors ၊ laptops နဲ့ gaming consoles တွေမှာပါအသုံးပြုလို့ရဦးမယ်လို့သိရပါတယ်။
မူပိုင်ခွင့်တင်ထားတဲ့ ဖုန်းဟာ Bezels နည်းနည်းသာရှိတဲ့ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့ Screen ကိုသုံးပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီ Screen ပေါ်က Display ကတော့ OLED Display ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ OLED Display တွေကပဲ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့ Panel ရစေဖို့ အလင်းထိုးဖောက်နိုင်စွမ်းရှိလို့ပါ။
လောလောဆယ်တော့ ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်အချက်ကိုမှာသေချာမသိရသေးပါဘူး။ နောက်ထပ် Samsung ဟာ ဒီဖုန်းကို တကယ်ထုတ်နေလား ? မထုတ်နေလားဆိုတာကလည်း မသေချာသေးပါဘူး။ ဒီအတိုင်းမူပိုင်ခွင့်သက်သက်တင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမူပိုင်ခွင့်ကြောင့် နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့ Display နဲ့ ဖုန်းတွေကိုတွေ့လာရတော့မှာလား?